University of zimbabwe Archives - iHarare News
UZ Former Student Appears In Court After Stealing Laptops Worth $1 Million, Faces Twenty Counts Of Unlawful Entry
UZ Former Student Appears In Court After Stealing Laptops Worth ZW $1 Million, Faces Twenty Counts Of Unlawful Entry A 23-year-old University of Zimbabwe (UZ) former student has been nabbed after allegedly stealing laptops worth $952…
Universities Reopen For Continuation Of Exams
Universities Reopen For Continuation Of Exams Universities around Zimbabwe have reopened for the continuation of exams. At a time when students are supposed to be getting ready for a new semester, some are returning to their…
New Brain Drain As 15 Lecturers Resign From UZ For Greener Pastures
Audrey L Ncube	 Jul 7, 2020 0
15 Lecturers Resign From UZ For Greener Pastures The University Of Zimbabwe (UZ) is experiencing another brain drain as many lecturers are resigning from the institution. In less than a week, 15 lecturers have resigned from UZ…
Philip Mangwiro	 Jan 20, 2020 0
This is How Much University Education Costs in Zimbabwe, SEE PHOTOS Parents with their children at the University of Zimbabwe have been left crying foul after the institution increased tuition fees. The Ministry of Higher and Tertiary…
UZ Medical Students To BOYCOTT Exams Over On-going Doctors’ Strike
Students at the University of Zimbabwe doing Medicine have refused to sit for their examinations saying that they did not learn all the relevant course materials due to the ongoing strike by the doctors. The students argue that they did…
Drama As Lustful U.Z Student Spies On Female Students Bathing
Allen Brown	 Oct 24, 2019 0
A University of Zimbabwe Banking and Finance student is in the soup after entering a female hostel bathroom and spying on a female student who was taking a bath. H-Metro reports that there was drama when Tinotenda Checha (23) was caught…
83 grams of meat per student.Beans Galore.UZ makes drastics changes to students diet as economic woes mount
UZ makes drastic changes on menu The University of Zimbabwe has made drastic adjustments to its students' menu by adding beans as part of their meal plan. The institution has also made some serious rationing which will see 12 students…
GVT Evicts Polytechnic Student’s To Make Way For Mugabe Mourners After Rebellion By UZ Students
Harare Polytechnic students have been ordered to vacate their hostels before 6 am today to accommodate mourners for former President Robert Mugabe's funeral who passed away last week in Singapore. The development comes days…
Allen Brown	 Aug 7, 2019 0
Horror scenes as Missing UZ student is found dead in Mazowe Dam
Sharon Chirisa	 Jul 9, 2019 0
Missing UZ student found dead in Mazowe Dam In a tragic, twist a missing UZ student identified as Tinotenda Zveguta was found dead, floating in Mazowe dam. Tinotenda (23) reportedly went missing on Tuesday 02 July. He was said to…
UZ workers beg for food, accommodation form school authorities as economic woes mount
UZ workers beg for food, accommodation Ordinary workers at the University of Zimbabwe (UZ) have written to authorities running the country’s top most learning institution demanding campus accommodation as well as food as relief to high…
Allen Brown	 Apr 8, 2019 0
University Of Zimbabwe Speaks On Plans To Give Students Game Meat
Tim. E. Ndoro	 Feb 23, 2019 0
The University of Zimbabwe has distanced itself from a letter claiming that due to the economic hardships, the institution will now be feeding its students with game meat such as elephant and buffalo.